ပံ့ပိုးမှုများ - ဆွစ်ဇာလန်၏ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဘုရားကျောင်း
မင်းကအရာရာတိုင်းကိုနားလည်ပြီလို့ထင်ပြီးနောင်မှစိတ်ကူးမရှိဘူးဆိုတာမင်းသိဖူးသလား။ ရှေးဟောင်းစကားပုံအတိုင်းလိုက်လုပ်ကြည့်ပါ။ မည်မျှကြိုးစားမည်နည်း။ အခြားအရာအားလုံးအလုပ်မလုပ်ပါကညွှန်ကြားချက်များကိုဖတ်ပါ။ ညွှန်ကြားချက်များကိုဖတ်ပြီးသည့်နောက်ငါပင်ရုန်းကန်ခဲ့ရသည်။ တစ်ခါတစ်ရံအဆင့်တိုင်းကိုဂရုတစိုက်ဖတ်ပြီး၊ ကျွန်ုပ်နားလည်သည့်အတိုင်းလုပ်ဆောင်ပါ။ ကျွန်ုပ်မှန်ကန်စွာမလုပ်မိသောကြောင့်တစ်ဖန်ပြန်စပါ။
ဘုရားသခင်၏ကျေးဇူးတော်ကို - စစ်မှန်တဲ့လည်းကောင်းဖြစ်သလော
၎င်းသည်အမှန်တကယ်ဖြစ်ရန်အလွန်ကောင်းလွန်းနေပြီး၎င်းသည်လူသိများသောစကားစတင်ပုံနှင့်၎င်းသည်မဖြစ်နိုင်ကြောင်းသင်သိထားသည်။ သို့သော်ဘုရားသခင့်ကျေးဇူးတော်နှင့်စပ်လျဉ်း။ အမှန်တကယ်မှန်ကန်သည်။ သို့တိုင်အချို့သောသူများကမူကျေးဇူးတရားသည်ဤကဲ့သို့သောအရာများမဖြစ်နိုင်ဟုအခိုင်အမာပြောဆိုပြီးအပြစ်တရား၏လိုင်စင်အဖြစ်ရှုမြင်သည်ကိုရှောင်ရှားရန်ဥပဒေကိုကျင့်သုံးကြသည်။ သင်၏စိတ်ရင်းမှန်ဖြင့်လွဲမှားစွာလှည့်ဖြားသောအားထုတ်မှုများသည်တရား ၀ င်ပုံစံတစ်မျိုးဖြစ်ပြီးလူတို့အားပြောင်းလဲစေနိုင်သောကျေးဇူးတော်အားပေးသည်။
ငါတို့ရှိသမျှသည်ရှေ့တော်၌ကြားရသောစကားစုတစ်စု။ တမန်တော်ပေါလု၏သွန်သင်ဆုံးမခြင်းသည်“ ခရစ်တော်၌ရှိခြင်း” ဖြစ်သည်ဟုအဲလ်ဘတ်ရှဝိုက်ဇ်ကဖော်ပြခဲ့သည်။ ပြီးတော့ Schweitzer ကနောက်ဆုံးမှာသိထားရတယ်။ ကျော်ကြားသောဓမ္မပညာရှင်၊ ဂီတပညာရှင်နှင့်အရေးကြီးသောသာသနာပြုဆရာဝန်အနေနှင့် ၂၀ ရာစုအတွင်းရှိအထင်ရှားဆုံးဂျာမန်များထဲမှတစ်ပါးဖြစ်သည်။ ၁၉၅၂ ခုနှစ်တွင်နိုဘယ်ဆုကိုချီးမြှင့်ခဲ့သည်။ ၁၉၃၁ ခုနှစ်တွင်ထုတ်ဝေခဲ့သောတမန်တော်ပေါလု၏ဘာသာရေးယုံကြည်ချက်စာအုပ်တွင် Schweitzer က ...
ဘုရားသခင်သည်များစွာသောသူတို့ကိုချစ်နေဆဲဖြစ်သည်ကိုခရစ်ယာန်များနေ့စဉ်နေ့တိုင်းအသက်ရှင်ကြသည်ကိုသင်လုံးဝမသိပါသလော။ ဘုရားသခင်ကသူတို့ကိုနှင်ထုတ်လိမ့်မည်ဟု ပို၍ စိုးရိမ်သည်။ သင်အလားတူကြောက်ရွံ့မှုမျိုးရှိနိုင်သည်။ ခရစ်ယာန်တွေကဘာကြောင့်ဒီလောက်စိုးရိမ်ပူပန်ကြတာလဲ။ အဖြေမှာရိုးသားဖြောင့်မတ်ခြင်းဖြစ်သည်။ သူတို့ဟာအပြစ်သားတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာသူတို့သိတယ်။ သင်၏ပျက်ကွက်မှု၊
တစ်ခါတစ်ရံလူတို့သည်ခရစ်ယာန်သွန်သင်ချက်ကိုလူတို့ကယေရှုခရစ်တော်အားဖြင့်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်နိုင်သည်ဟုသွန်သင်ကြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဗဟုဝါဒအသိုင်းအဝိုင်းတွင်သည်းခံမှုမျှော်လင့်သည်၊ အမှန်တကယ်လိုအပ်သည်၊ ဘာသာရေးလွတ်လပ်ခွင့် (ဘာသာတရားများအားလုံးကိုခွင့်ပြုသည်) ဟူသောအယူအဆသည်ဘာသာတရားအားလုံးသည်တစ်နည်းနည်းဖြင့်မှန်ကန်သည်ဟုဆိုလိုသည်။ လမ်းများအားလုံးသည်ဘုရားသခင်တစ်ပါးတည်းကိုသာ ဦး ဆောင်လမ်းပြသည်ဟုအချို့ကဆိုကြသည်။
ခရီးသွား Ask ည့်သည်က“ Hic de vergine Maria Jesus natus est” လက်တင်စာဖြင့်ငွေကြယ်ကြီးကိုညွှန်ပြသည်။ သူက“ ငါကြိုးစားမယ်” ဟုပြန်ဖြေခဲ့ပြီး၎င်းကိုဘာသာပြန်ရန်ကြိုးစားခဲ့သည်။ ထိုသူသည်ကျွန်ုပ်၏ဂျပိန်လက်တင်စကားအားဖြင့်“ ဤတွင်ယေရှုကိုအပျိုစင်မာရိမှမွေးဖွားခဲ့သည်။ ”“ မင်းဘယ်လိုထင်သလဲ” ဟုထိုလူအားမေးခဲ့သည်။ “ မင်းထင်သလား?” ဒါဟာသန့်ရှင်းတဲ့ဘုရားကိုပထမ ဦး ဆုံးအကြိမ်သွားခဲ့တာ ...
သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော် - လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းလားစရိုက်လား။
သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော် ကဲ့သို့သော လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်း သတ်မှတ်ချက်များဖြင့် ဖော်ပြလေ့ရှိသည်။ B. ဘုရားသခင်၏ တန်ခိုးတော် သို့မဟုတ် တည်ရှိခြင်း သို့မဟုတ် လုပ်ဆောင်မှု သို့မဟုတ် အသံ။ ဤသည်မှာ ဝိညာဉ်တော်အား ဖော်ပြရန် သင့်လျော်သောနည်းလမ်းဖြစ်ပါသလား။ ယေရှုကို ဘုရားသခင်ရဲ့ တန်ခိုးတော်လို့လည်း ဖော်ပြထားတယ်။ (ဖိ 4,13(ဂလ.)၊ 2,20) ဘုရားသခင်ရဲ့လုပ်ဆောင်ချက် (ယော 5,19) ဘုရားသခင်ရဲ့ အသံတော် (ယော 3,34) သို့သော် ပင်ကိုယ်စရိုက်အားဖြင့် ယေရှုအကြောင်း ပြောကြပါစို့။ သမ္မာကျမ်းစာက သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်ထံ ရေးသည်...
ဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်သောသူအများစုသည်ဘုရားသခင်သူတို့ကိုချစ်ကြောင်းယုံကြည်ရန်အခက်တွေ့နေသည်ကိုသင်သိပါသလား။ လူတို့သည်ဘုရားသခင်အားဖန်ဆင်းရှင်နှင့်တရားသူကြီးအဖြစ်မြင်ယောင်ရန်လွယ်ကူသော်လည်းဘုရားသခင်ကိုချစ်မြတ်နိုးပြီးဂရုစိုက်စောင့်ရှောက်သောအရှင်အဖြစ်မြင်ရန်အလွန်ခက်ခဲသည်။ သို့သော်အမှန်တရားမှာကျွန်ုပ်တို့၏အဆုံးမဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာ၊ ဖန်တီးမှုနှင့်ပြီးပြည့်စုံသောဘုရားသခင်သည်သူ့အားဆန့်ကျင်သောအရာတစ်စုံတစ်ခုကိုဖန်တီးသည်မဟုတ်ပါ။ ဘာမှမ ...
ရှင်ပြန်ထမြောက်သောကယ်တင်ရှင်ကိုကျွန်ုပ်တို့ကိုးကွယ်ကြသည်။ ဆိုလိုသည်မှာယေရှုသည်အသက်ရှင်သည်။ ဒါပေမယ့်သူဘယ်မှာနေတာလဲ သူ့မှာအိမ်ရှိသလား။ သူသည်အိုးမဲ့အိမ်မဲ့နေစရာနေရာတွင်စေတနာ့ဝန်ထမ်းအဖြစ်လမ်းပေါ်တွင်ဆက်လက်နေထိုင်သည်။ သူသည်မွေးစားကလေးများနှင့်အတူထောင့်ရှိအိမ်ကြီးတွင်လည်းနေနိုင်သည်။ သူနေမကောင်းဖြစ်သည့်အခါအိမ်နီးချင်း၏မြက်ရိတ်စက်ကိုသူလုပ်သကဲ့သို့သူလည်းသင်၏အိမ်တွင်နေထိုင်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မည်။ သခင်ယေရှုသည်သင်၏အဝတ်အစားများကိုပင်ဝတ်ဆင်နိုင်သည်၊
လူများစွာသည် ယေရှု၏နာမတော်ကို သိကြပြီး သူ၏အသက်တာအကြောင်း တစ်ခုခုကို သိကြသည်။ မွေးနေ့ပွဲကို ကျင်းပကြပြီး ကွယ်လွန်ခြင်းအထိမ်းအမှတ်ကို ကျင်းပကြသည်။ သို့သော် ဘုရားသခင်၏သားတော်အကြောင်းကို သိခြင်းသည် ပို၍နက်နဲသည်။ ယေရှုမသေဆုံးမီလေးတွင်၊ ဤအသိပညာအတွက် သူ၏နောက်လိုက်များအတွက် ဆုတောင်းခဲ့သည်– “ထာဝရအသက်ကား၊ စစ်မှန်သောတစ်ဆူတည်းသောဘုရားသခင်ဖြစ်ပြီး ကိုယ်တော်စေလွှတ်တော်မူသော ယေရှုခရစ်ကို သူတို့သိကြသည်” (ယော ၁။7,3) ရှင်ပေါလုသည် ခရစ်တော်ကို သိကျွမ်းခြင်းအကြောင်း အောက်ပါအတိုင်း ရေးသားခဲ့သည်– “သို့သော်လည်း ငါ့အား . . .
များသောအားဖြင့်သခင်ယေရှုကိုသိကျွမ်းခြင်းအကြောင်းပြောဆိုလေ့ရှိသည်။ မည်သို့ရှေ့ဆက်လုပ်ဆောင်ရမည်နည်းသည်အနည်းငယ်ရှုပ်ထွေးပြီးခက်ခဲပုံရသည်။ အဓိကအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်သူ့ကိုမတွေ့နိုင်ခြင်း၊ မျက်နှာချင်းဆိုင်စကားပြောခြင်းတို့ကြောင့်ဖြစ်သည်။ သူသည်တကယ့်ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သည်။ သို့သော်၎င်းသည်မမြင်နိုင်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်သူ၏အသံကိုလည်းမကြားနိုင်ပါ။ သို့ဆိုလျှင်ကျွန်ုပ်တို့သည်မည်သို့သူ့ကိုသိကျွမ်းလာနိုင်သနည်း။ မကြာသေးမီကတစ်ခုထက်ပိုပြီး ...
ကျွန်ုပ်၏ဘွဲ့ကြိုကျောင်းတက်စဉ်တွင်၊ Triune God ကိုပြန်လည်သုံးသပ်ရန်တောင်းဆိုထားသောအတန်းတစ်ခုတက်ခဲ့သည်။ Trinity သို့မဟုတ် Holy Trinity ဟုလည်းသိကြသော သုံးပါးပေါင်းတစ်ဆူကို ရှင်းပြသောအခါ၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ ကန့်သတ်ချက်များကို ဆန့်ကျင်ပါသည်။ ရာစုနှစ်များတစ်လျှောက်၊ လူအမျိုးမျိုးတို့သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ခရစ်ယာန်ယုံကြည်ခြင်း၏ အဓိကလျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်မှုကို ရှင်းပြရန် ကြိုးပမ်းခဲ့ကြသည်။ အိုင်ယာလန်တွင် စိန့်ပက်ထရစ်သည် မည်ကဲ့သို့ရှင်းပြရန် အရွက်သုံးပွင့်ကို အသုံးပြုခဲ့သည်။
သမ္မာကျမ်းစာတွင်“ ဘုရားသခင်” ဟုဖော်ပြထားသောစည်းလုံးမှုသုံးခုသည်“ ရှည်လျားသော၊ ဖြူသောမုတ်ဆိတ်ရှည်ရှည်သောလူကြီး” ၏အဓိပ္ပာယ်ကိုဘုရားသခင် ဟူ၍ ခေါ်ဆိုခြင်းမဟုတ်ပါ။ သမ္မာကျမ်းစာထဲတွင်လူတစ် ဦး သည်ခမည်းတော်၊ သားတော်၊ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သုံးပါးတို့၏စည်းလုံးမှုအဖြစ်ကျွန်ုပ်တို့ကိုဖန်ဆင်းတော်မူသောဘုရားသခင်ကိုအသိအမှတ်ပြုသည်။ ဖခင်သည်သားမဟုတ်၊ သားသည်ဖခင်မဟုတ်ပါ။ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည်ခမည်းတော်သို့မဟုတ်သားတော်မဟုတ်ပါ။
အကယ်၍ သင်သည် ဘုရားသခင်ကို မေးခွန်းတစ်ခုမေးနိုင်လျှင်၊ ဘယ်ဟာဖြစ်မလဲ။ သင့်ကံကြမ္မာအရ “ကြီးကြီး” ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါသလား။ လူတွေဘာကြောင့်ဒုက္ခရောက်နေရတာလဲ။ သို့မဟုတ် သေးငယ်သော်လည်း အရေးတကြီးဖြစ်သည်- ကျွန်ုပ်ဆယ်နှစ်သားအရွယ်တွင် ကျွန်ုပ်ထံမှ ထွက်ပြေးခဲ့သော ကျွန်ုပ်၏ခွေးမှာ ဘာဖြစ်သွားသနည်း။ ငယ်​ငယ်​ကချစ်​သူနဲ့လက်​ထပ်​ရင်​ ဘာဖြစ်​မလဲ။ ဘုရားသခင် ဘာကြောင့် ကောင်းကင်ကို ပြာစေတာလဲ။ ဒါမှမဟုတ် ခင်ဗျားက သူ့ကို မေးချင်တာ ဖြစ်နိုင်တယ်- မင်းက ဘယ်သူလဲ။ ဒါမှမဟုတ် မင်းဘာဖြစ်တာလဲ။ ဒါမှမဟုတ် ဘာလိုချင်လဲ။ အဆိုပါ…
ငါတို့ကိုမွေးဖွားခဲ့တယ်။ ဘဝ၌အကြီးမားဆုံးသောပြောင်းလဲမှုဖြစ်နိုင်သည့်ဝိညာဉ်ရေးရာကိုသင်ခံစားရရန်ကျွန်ုပ်နှင့်ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်အတွက်ဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်သည်ကျွန်ုပ်တို့အားသူ၏ဖန်ဆင်းခြင်းသဘောသဘာဝကိုစားသုံးနိုင်သည့်နည်းဖြင့်ဖန်ဆင်းခဲ့သည်။ ဓမ္မသစ်ကျမ်းသည်ဤဘုရားသခင့်သဘောသဘာဝကိုလူသားအပြစ်၏အညစ်အကြေးများကိုဖယ်ရှားပစ်သောရွေးနုတ်ရှင်အဖြစ်ဖော်ပြသည်။ ထို့အပြင်ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးသည်ဤဝိညာဉ်ရေးသန့်စင်ခြင်းကိုလိုအပ်သည်။
ယုံကြည်မှုဆိုတာ "ယုံကြည်မှု" လို့ အဓိပ္ပါယ်ရပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ကယ်တင်ခြင်းအတွက် ယေရှုကို ကျွန်ုပ်တို့ အပြည့်အဝ ယုံကြည်နိုင်ပါသည်။ ဓမ္မသစ်ကျမ်းက ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျွန်ုပ်တို့လုပ်ဆောင်နိုင်သည့်အရာအတွက် တရားမျှတခြင်းမဟုတ်ကြောင်း၊ ဘုရားသခင်၏သားတော်ခရစ်တော်ကို ယုံကြည်ကိုးစားရုံဖြင့် ရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖော်ပြထားသည်။ တမန်တော်ပေါလု ဤသို့ရေးခဲ့သည်– “ထို့ကြောင့် လူသည် ပညတ်တရား၏အကျင့်မရှိဘဲ ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် ဖြောင့်မတ်ကြောင်းကို ယခုယုံကြည်ကြကုန်အံ့” (ရောမ၊ 3,28) ကယ်တင်ခြင်းသည် ကျွန်ုပ်တို့အပေါ်၌ လုံးလုံးမမူတည်ပါ။
လွန်ခဲ့သောအနှစ် ၂၀ ကသူနှစ်ခြင်းခံခဲ့သောအဓိကအကြောင်းရင်းမှာသူသည်သူ၏အပြစ်အလုံးစုံကိုကျော်လွှားနိုင်ရန်သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၏တန်ခိုးကိုရယူလိုသောကြောင့်ဖြစ်သည်ဟုကျွန်ုပ်တို့၏အကြီးအကဲတစ် ဦး ကမကြာသေးမီကပြောခဲ့သည်။ သူ၏ရည်ရွယ်ချက်များသည်ကောင်းမွန်သော်လည်းသူ၏နားလည်မှုမှာအတော်အတန်ချို့ယွင်းချက်ရှိသည် (နားလည်မှုလွဲခြင်းများရှိသော်လည်းဘုရားသခင်၏ကျေးဇူးတော်အားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့ကယ်တင်ခြင်းမခံရသည်မှာမည်သူမျှစုံလင်သောနားလည်မှုမရှိပါ။ ) သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည်ကျွန်ုပ်တို့“ ဖွင့်” ရုံမျှသာမဟုတ်ပါ။
ကောရိန္သုမြို့သားများထံ ပေါလု၏ဒုတိယစာတွင်၊ သူသည် ယုံကြည်သူများ၏အသက်တာကို လက်တွေ့ကျသောနည်းများဖြင့် အံ့ဖွယ်ရွှင်လန်းမှုလက်ဆောင်ကို မည်သို့ထိမိကြောင်း ထူးမြတ်သောပုံဥပမာတစ်ခုပေးခဲ့သည်။ “ချစ်လှစွာသော ညီအစ်ကိုတို့၊ မာကေဒေါနိပြည် အသင်းတော်တို့၌ ပေးတော်မူသော ဘုရားသခင်၏ ကျေးဇူးတော်ကို ငါတို့သည် သင်တို့အား သိစေသည်” (၂ ကော. 8,1) ပေါလုသည် အရေးမပါသော အစီရင်ခံစာကို ပေးရုံမျှမက၊ ကောရိန္သုမြို့ရှိ ညီအစ်ကို မောင်နှမများအား သက်သာလောနိတ်မြို့ရှိ အသင်းတော်ကဲ့သို့ အလားတူ ဘုရားသခင်၏ ကျေးဇူးတော်ကို တုံ့ပြန်ရန် သူအလိုရှိသည်။
Billy Graham သည်ယေရှု၌ရှိသောကယ်တင်ခြင်းကိုလက်ခံရန်လူများကိုအားပေးသည့်စကားစုကိုမကြာခဏသုံးလေ့ရှိသည်။ သူက“ သင်ကဲ့သို့သာလာပါ” ဟုပြောခဲ့သည်။ ဘုရားသခင်ကအရာရာတိုင်းကိုမြင်သည်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏အကောင်းဆုံးနှင့်အဆိုးဆုံးဖြစ်သည်။ သူသည်ငါတို့ကိုချစ်သေး၏။ “ သင်ကဲ့သို့ဖြစ်အံ့သောငှာလာကြလော့” ဟူသောဖိတ်ခေါ်ချက်ကတမန်တော်ပေါလု၏ဤစကားများကိုရောင်ပြန်ဟပ်ခြင်းဖြစ်သည် -“ ငါတို့သည်အားနည်းသော်လည်းခရစ်တော်သည်ငါတို့အတွက်ကြောင့်အသေခံတော်မူသည် ဖြစ်၍၊ ယခု…
ရုပ်ရှင်ရဲ့နာမည်ကိုကျွန်တော်မမှတ်မိဘူး ငါကြံစည်မှုသို့မဟုတ်သရုပ်ဆောင်များကိုများ၏အမည်များကိုမှတ်မိနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ သို့သော်လည်းငါမြင်ကွင်းတစ်ခုကိုမှတ်မိသေးတယ်။ သူရဲကောင်းသည်စစ်အကျဉ်းစခန်းမှထွက်ပြေးလွတ်မြောက်သွားပြီးစစ်သားများအားလိုက်လံရှာဖွေခြင်းကြောင့်အနီးအနားရှိရွာတစ်ရွာသို့ထွက်ပြေးခဲ့သည်။ သူပုန်းကွယ်ရာနေရာတစ်ခုကိုအလွန်အမင်းရှာဖွေနေစဉ်နောက်ဆုံးတွင်သူသည်ပြောင်ပြောင်တင်းတင်းပြန့်ပြူးသောပြဇာတ်ရုံတစ်ခုထဲသို့ ၀ င်သွားပြီးထိုနေရာတွင်နေရာတစ်ခုရှာတွေ့ခဲ့သည်။ သို့သော်မကြာမီ…